Raaxada naagaha garoobka ah. Qaabka Ugu Macaan Galmada Dumarka Tilmaan Sir Ah?
Pb_user_/ October 2, 2012/ Raaxada naagaha garoobka ah/ comments
Raga dareenka badan maxaa daawo u ah. Cuntada iyo raaxada raga iyo dumarka. Daawo dabicii ah oo kacsiga xoojisa. Riyada hirka badda oo kacsan. Kacsiga goormuu cudur noqdaa. Leave A Reply Cancel Reply.
Related Posts. Mar 21, Feb 14, Jan 17, Prev Next 1 of 3. Cayda dumarka Damidda geedka Hadalka naagta Hadalka sariirta kacsi Kacsiga waxa keeno Kacsiga waxa kordhiyo Kacsiga waxa yareeyo. Qeybta su'aalaha. Prev Post Riyada hirka badda oo kacsan. Next Post Kacsiga goormuu cudur noqdaa. Leave A Reply. Welcome, Login to your account. Forget password? Remember me. No account?
The last five answers. Midabyada carrabka iyo cudurada xiriirka ka dhexeeya Sababaha keena dhuun qalaylka Nin eed badan guurkiisa maxaa lagala kulmaa Sababaha keena xanuunka xaniinyaha Fasirka riyada dibqalooca maxay noqon.E reryga Gudniin waxa loola jeedaa Goyn, waana ta birta geedaha lagu gooyo lagu magacaabo Gudin.
Mowduuca gudniinku waxa uu kamid yahay mowduucyada aan wax badan laga qorin, aadna mooddo inay dadku ka hadalkiisa kaba xishoonayaan. Culimada Islaamka badankoodu ugama aanay hadal gudniinka sida ay uga hadleen waxyaabo badan oo ka ahmiyad yar sida; Cadaysiga. Tusaale ahaan, Imaam Xaamid Al-Gasaali silsiladdiisii kutubbada ee uu ugu magac daray Soo noolaynta Culuumta Diintashan sadar oo qura ayuu kaga soo hadal qaaday gudniinka. Ma jirto hal Aayad oo — xitaa — laga dhadhasan karo jiritaanka gudniinku.
Sidoo kale waxa la waayey hal xadiis oo saxiix ah oo waajibinaya amaba sunno ka dhigaya gudniinku. Gudniinka raggu waxa weeye in gabal laga jaro maqaarka ku daboolan dhalfada geedka ninka, sidaas buuna jirku uga takhallusayaa wixii wasakh, jeermis, nijaaso iyo ur ku hoos jiray maqaarkaasi la jaray. Daraasado badan oo ay sameeyeen culimada caafimaadku waxay ku caddeeyeen in cudurrada kaadi mareenka raggu yar iyo weyn ay ku badan yihiin kuwooda aan gudnayn.
Waxa kale oo la caddeeyey in cudurrada galmada laysku qaadsiiyo sida Jabtida iyo Aydhisku ay aad ugu badan yihiin ragga aan gudnayn.
Culimadu waxay sheegaan in Nabi Ibraahim CS uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee: Isguda, Ciddiyaha iska jara, Surwaal gashada, Shaaribka gaabiya, Kaba kabsada, Seef ku dagaallama, iyo weliba qofkii ugu horreeyey ee ay Madaxiisa Cirro kasoo baxdo. Haddaba kol haddii Nabi Ibraahim la faray inuu isgudo, waajib bay ahayd taasi la saaray. Nabigeennii suubbanaa Muxammad SCW waxa la weriyey inuu dhashay isagoo gudan.
Xadiis kale oo uu weriyey Anas ibnu Maalik waxa uu ku sheegay in Nabigu SCW yiri: Karaamooyinka Eebbe igu karaameeyey waxa kamid ah in aan dhashay anigoo gudan iyo in aan cawradeyda cidi weligeed arag.
Intaynaan arrintaas u gelin, bal marka hore aynu dib ugu laabanno Carabtii hore iyo Casrul-Jaahiligii. Carabtii hore ninka buuryo qabka ah ee aan gudnayn way caayi jireen, waxana taas lagu xaqiijiyey gabayadii la tiriyey xilligaas.
Haddaba kolkuu Islaamku yimid, gudniinka raggu waxa uu kamid noqday caadooyinkii la ansixiyey, ha yeeshee culimada diintu ilaa iyo iminkadan la joogo, inkastoo dhammaan ku qanacsan yihiin in wixii Nabi Ibraahim CS la faray ay annagana ina saaran yihiin, misana kuma aanay heshiin in gudniinku waajib yahay iyo inuu sunno yahay midnaba.
Imaam Axmed iyo Maalikiyada qaar waxay yiraahdeen waa waajib, halka Abuu Xaniifah ka yiri waa sunno. Ibnul-Qayyim waxa uu yiri: Fuqahadu way isku khilaafeen arrinka. Culimo badan ooy kamid yihiin Shaafici, Maalik iyo Axmed way waajibiyeen, isagoo weliba Imaam Maalik uu aad u adkeeyey oo yiri: Ninkaan la gudini Imaam ma noqon karo, maragna ma geli karo oo dhaartiisa lama aqbalo.
Xasan Al-Basri iyo Abuu Xaniifah waxay iyagu yiraahdeen waa sunno ee waajib ma aha. Qofkii guditaanka iska daayase muxuu xukunkiisu yahay? Waxa Qolfada laga gooyaa qayb goynteedu ay suurtagal ka dhigi kartyo in dhalfada oo dhan amaba inteeda badani ay qaawanaato.
Gudniinku waxa uu leeyahay laba waqti oo kala ah: Waqti uu waajib yahay kaasi oo ah waqtiga qaan gaarka iyo waqti uu sunno yahay oo ah intaanu qofku qaan gaarin. Waxa sunno ah bay culimadu leeyihiin in ilmaha la gudo waqi u dhexeeya marka uu dhasho ilaa iyo toddoba jirkiisa, waqtigaasi oo u naxariis badan, dhaawacuna bogsoon ogyahay.
Culimada badankoodu waxay isku raaceen inay wanaagsan tahay in la gudo maalinta toddobaad ee dhalashadiisa, in uu taag daranyahay mooyee, markaasi oo dib loogu dhigayo. Imaam Nawawi waxa uu kitaabkiisii Ar-Rowdah ku qoray sidatan: Gudniinku waxa uu waajibayaa waqtiga uu qofku qaan gaarayo, waase sunno in toddobo lagu gudo, in uu taag daran yahay oo aanu xammili karin mooyee, markaasi oo ay tahay in dib loo dhigo.Waxaa haweeneyda waajib ku ah inay ninkeeda daacad u ahaato una yeesho wax kasta oo uu ka dalbado, aan ka ahayn inay Eebbe ku caasido.
Haddaba xaqqa uu ninku ku leeyahay naagtiisu waa wax aad u weynoo haddii ayan gudan gaarsiin kara Naar, hadday gudatana Janno ku geleyso. Dabeeto aabbihii baa bukooday, markaas bay Rasuulka u dirtay dad si uu ugu oggolaado inay aabbeheed usoo degto. Haweeneydu waa inaanay guriga cidna wax ka siin ninkeedoon oggolayn, hadday saa yeeshana isna ajarkii buu helayaa iyana dembigii. Waxaa kale oo uu ku leeyahay inaanay soon sunno ah soomin isagoon u oggolaan, hadday soontana gaajo iyo harraad waxan ahayn ka heli mayso.
Salaadda ay ku tukato gurigeeda daaraddiisa ayaa kaga fadli badan ta ay ku tukato Masjidka, salaadda ay ku tukato guriga dhexdiisuna way kaga fadli badan tahay ta ay daaradda ku tukato, halka salaadda ay gogosheeda ku ag tukataa ay kaga fadli badan ta ay guriga intiisa kale ku tukato.
Waxaa iyana xuquuqda uu ninku ku leeyahay naagtiisa kamid ah, inay isdaryeesho isna asturto iyo inay ka waantowdo weydiisashada wax aanu awoodi karin. Ma fududa inay haweeneydu ninkeeda siduu rabo u raalligeliso, gaar ahaan kolkay arrintu galmo ku lug leedahay. Waxaa markaa kulmaya isagoon waxa uu tabanayo si bareer ah ugu sheegi karin iyo iyadoo aqoon-darri ka sokow isaga uun wilaayada saarata.
Hadduu xitaa sidaas baan rabaa sidaana iga daa oran lahaa hawshii galmada ayaaba saa ku dhadhan beelaysa. Ninku waxa uu jeclaan lahaa inay xaaskiisu iskeed u garato dookhiisa iyo rabitaankiisa isagoon u sheegin. Haddaba si aynu arrinka u fududeyno, ugu horreyntaba waa inay haweeneydu ogaataa in rag oo dhami isku dookh ka yihiin dhanka galmada oo waxa ninkeedu ka doonayaa ay yihiin waxa nin kasta oo kale uu xaaskiisa ka doono, aanayna ahayn wax ninkeeda ku kooban.
Marka xiga waa inay isku daydaa in waxyaabaha aynu soo sheegi doonno ay dhaqan geliso, si ay ninkeeda rabitaankiisa u raalligeliso iyana raaxada ula wadaagto. Ka badbadin igama aha haddaan iraahdo rag oo dhami way u riyaaqaan kolkay arkaan haweenkooda oo galmada hoggaanka u haaya, halkay iyagu ka doonan lahaayeen. Haddaba gabaryahay waa in aanad ka xishoon inaad gacalkaaga ugu baaqdid si aan bareer ahayn una tustid inaad galmo doonaysid, sida adigoo ku jiitama isku nabahoraadka saara, madaxa iyo garka u salaaxa, hadal macaan oo xodxodasho ahna xaraaraddiisa ku kiciya.
Dumarka qaar baa aaminsan in dhaqdhaqaaqa niikada iyo reenka ka baxa xilliga galmada oo raggu dareemaa amaba maqlaa tahay wax ceeb ah, sidaa darteedna iscaburiya iskuna celiya dareenkooda oo dib u liqa.
Allow yaa usheega dumarka caynkaas ah inay iscaddibayaan, isna seejinayaan, raggoodana seejinayaan raaxo iyo macaan tii ugu darrayd.
Gabaryahay galmadu ma aha oo qura kaqaybgal jireed ee waxa weeye oo kale kaqaybgal dareen iyo rabitaan, dhunkashada iyo ereyada macaanina waa lagama maarmaan, mana loo baahna inaad ka xishootid ee saa u ogoow. Waxyaabaha haddaba uu doonayo waxaa kamid ah, dhunkasho macaan, shafka ku qabasho, salaaxis aanay doonisi ku jirin iyo haasaawe macaan.
Waxyaabahaasi kolkay guurka ka maqan yihiin wuxuu noqdaa sida raashin aan cusbo lahayn. Dumarka qaar baa u haysta in ninka ay waajib ku tahay inuu xaaskiisa habeen kasta u tago, hadduu saa yeeli waayana uqaata inuu isbeddelay ama dumar kale ka raacay amaba ay ka dhammaatay oo uusan iyadaba raalligelin karin. Ninku kolka uu ka fekerayo duruufaha hadba noloshiisa kusoo kordha, niyad uma haayo naag utag, naftiisa iyo niyaddiisuna uma qaybsami karaan laba meelood, markaasi oo kalena waxaa haweeneyda la gudboon inay isku daydo siday u fahmi lahayd mashaakilkiisa, ulana socon lahayd duruufihiisa ugana gargaari lahayd siduu uga gudbi lahaa.
Layli loogu magac daray Layliga Kegel baa ahaa kii ugu horreeyey ee gacan la mahadiyay ka geystay siday haweenku ku gaari lahaayeen heer biyabbax.
Waxaa layligaasi lagu tiriyaa inuu kamid ahaa horumarradii ugu muhiimsanaa ee uu gaaray Cilmiga Jinsigu, waxaana markii hore loo isticmaali jiray daaweeynta dadka ay kaadidu ka fara baxsato ee aan suuliga gaarsiin karin. Waxaa jira saddex muruq oo ku yaal sinaha hoostooda kuwaasi oo kantaroola godka saxarada, godka cambarka iyo kaadi mareenka.
Shaqada murqahaasi waxa weeye miirid, majuujin iyo joojin kolka uu qofku kaadinayo ama saxaroonayo. Mar hadday murqahaasi dabcaan, ma awoodaan inay kaadi mareenka u xiraan sidii looga baahnaa, qofkuna isagoon is-ogayn bay kaadidu ka baxsataa.Get breaking news stories, videos and photos. Astaamaha lagu garto kacsiga dumarka. Home Dareenka Astaamaha lagu garto kacsiga dumarka.
Oct 12, Share this. XD Thanks for read this article.
Please give Comment below. Noocyada bikrada gabdhaha qababka ay kala tahay. Dareenka raga iyo dumarka maxaa aad u badiyo. Galmada dabada dumarka maxaa sababo. Sida siigada looga soo kabsado. Jacaylka xaaska iyo raaxada sariirta xiriirka ka dhexeeya. Astaamaha qofka siigeysta lagu garto. Galmada dabada uur ma keentaa haddii shahwada lagu shubo. Gabar bikro iyo garoob waayoarag ah farqiga u dhexeeyo. Raashiinka cayilka u keena jirkaaga Foods that makes you fat.
Naagta la qabo oo nin kale waddo maxaa lagu gartaa. Dumarka la qabo oo nin kale eego. Bikro waa maxay toliinka fircooniga ma bikaaro baa. Seegada sida ugu fudud loo joojiyo rag iyo dumarba. Sixirka guurka reebo waa maxay.Post a Comment. Tusaale ahaan, halkii ay isaga galmoon jireen habeenkii iyaga oo daallan, waxaa habboon inay u dib dhigtaan ilaa iyo aroortii salaadda subax dabadeed xilligaasi oo intuu daalkii ka ba'ay, jirkooduna nastay, ay firfircoonaantii soo ceshadeen.
Maxaan sameeyaa si uu iiga raalli noqdo?.Post a Comment. Gabdhaha buuran iyo kuwa dhuuban kuwee raaxo macaan?
Sida la ogyahay dadka way kala duwan yihiin dooq ahaan, dad waxay ka helaan gabdhaha buuran dadna waxay jecelyihiin gabdhaha caatada ah, laakin markaan u eegno sida ay u badan yihiin nimanka waxay jecel yihiin naagaha buuran oo gadaal u weyn naagta marka ay sidaa tahay nimanka dareenkooda aad bay u soo jiidataa.
Gabadh Somalia oo magaceedu yahay Sumaya Ahmed ayaa film sexy looga duubay fagaara ajnabiyiin badan buuxaan. Sumaya maaha Somalidii ugu Naagaha waxay ugu jecelyihiin inay dhabar dhabar u seexdaan oo kaddib ninka ku kor seexdo, si daran ayay ugu raaxaysanayaan qaabkan, maxaay Bishaan kuwi ugu shidan.Post a Comment. Waxaa jira falal uu ninka sameeyo taasi oo qal qal gilineysa isu dheeli tirnaantii sida ay xaaska u aragato taasi oo ugu dambeyn keeni karta qilaafaad.
Hadaba dhaqanadaas ayay Masrax. Hadaba ninyahoow ku dadaal in aad fahanto dabeecadda lamaantaada iskuna day in aad kor ka aqriso wajigeeda. Posted by UnknownPublished at August 24, and have 0 comments.
Raaxada Guurka: Turxaan-Bixinta Nolosha Qoyska (Qeybta 5-aad)
Stranger things monologue max
Discord google authenticator new phone
Icq group chat links
Aimesh node disconnecting
Brasho on Raaxada naagaha garoobka ah